माधव नेपालको अध्यक्ष पद वैध की अवैध ? « Ok Janata Newsportal
माधव नेपालको अध्यक्ष पद वैध की अवैध ?
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि नेकपाका थप संकट देखिएको छ । यतिबेला दाहाल–नेपाल पक्षबाट अध्यक्ष बनेका माधवकुमार नेपाललाई आयोगको निर्णयले ठूलो चोट पुग्यो ।
भर्खरै दाहाल–नेपाल पक्षबाट प्रथम अध्यक्षको मान्यता पाएका नेपाललाई ‘तातो दुध न निल्न, न ओकल्न’ भएको छ । निर्वाचन आयोगले नै मान्यता नदिएपछि नेपाल टिके अध्यक्ष बन्नेछन् ।
आयोगले नेकपाका दुवै पक्षको निर्णयलाई मान्यता नदिएर ‘नेकपामा साविककै विवरण कायम रहने’ निर्णय गरेपछि उनको अध्यक्ष पद स्वतः अवैध भएको छ । उनी तत्काललाई फेरि वरिष्ठ नेतामा झरेका छन् ।
दाहाल–नेपाल पक्षको गत ७ पुसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पहिलो अध्यक्ष केपी ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्षमा मनोनीत गरेको थियो ।
नेकपाको विधानमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिको बहुमतले ओलीलाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको सो समूहले बताए पनि आयोगले त्यसलाई विधिसम्मत ठहर गरेन । र, नेपालले मनोनीत भएको ३३ दिनमा अध्यक्ष पद गुमाएका छन् ।